Binance Coin (BNB): Astaamaha asalka u ah sarrifka adduunka ugu weyn ee loo yaqaan 'crypto exchange' - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Binance Coin (BNB): Astaamaha asalka u ah isweydaarsiga ugu weyn adduunka ee 'crypto'
Tag: BEP, Binance, qashin qubka, Xisaabinta DEX, Soo jeedinta Eunsi Binance, Lacagta Tabaruca, Blockchain, BNB, Gubashada Lacagta BNB, DEX, Launchpad, Faylka Stablecoin
Waqtiga akhriska: 10 minuti
Binance waxay ku hogaamineysaa wadada dhinacyo badan. Kordhinta ay ku ballaariyeen suuqa, waxay sidoo kale balaariyeen hormarinta borotokoolka iyagoo soo saaray lacagtooda Binance ee asalka ah, BNB Binance Coin, ee hada tiknoolajiyadda fog fog 2017.
Waa maxay Binance Coin?
Binance Coin (BNB) waa waxyaabo badan. Calaamadda korantada ee loo isticmaalo ka ganacsiga cryptocurrencies, hab maamuus horumarineed si loo abuuro dApps loona soo saaro astaamo, qadaadiic "abaalmarin" ah oo dhiirrigelisa HODL labadaba (haysashada crypto aan iibin) iyo xitaa iibinta. Korsashada BNB waxay ku koreysaa heer la mid ah Isweydaarsiga laftiisa.
Ma jirtaa fursad kasta oo kobcitaankani hoos u dhacayo oo BNB ay u noqonayso calaamad adeegsi yar? Maqaalkan dib-u-eegista qadaadiic Binance waxaan isku dayi doonaa inaan wax kaaga baro. Waxaan sidoo kale fiirin doonaa BNB mustaqbalka fog qiimaha iyo rajada koritaanka.
Waa maxay Binance?
Waa maxay Binance Coin (BNB)?
Sidee buu BNB u shaqeeyaa?
Gubashada Lacagta BNB
Taariikhda qiimaha BNB
Ganacsiga iyo haysashada (ilaalinta) ee BNB
Horumarinta Silsiladda Binance
Qorshooyinka mustaqbalka ee Binance Coin
Isku xirayaal waxtar leh
Kahor intaanan fikrad kaa siin waxa ay tahay lacagta Binance, aan si dhakhso ah u eegno Sarrifka laga soo saaray. Binance hadda waa sarrifka ugu weyn ee loo yaqaan 'cryptocurrency' ee meeraha, oo leh mug ganacsi ku dhowaad $ 1 bilyan maalin kasta. Haddii aan u maleyno inay dhalatay bartamihii 2017 oo keliya .. 14kii Luulyo 2017 inay sax ahaato. Waxaad iska diiwaangelisaa Binance bilaash, waadna sameyn kartaa ka soo xiriir si aad u hesho Qiime dhimis 20% guddiyada, weligiis.
Qadaadiicyada Binance (Binance Coin) waa astaamo loo adeegsado barxadda Binance, sidaa darteed in kasta oo suuqa lagu kala iibsanayo oo qiimahoodu isbedelayo, dhaqan ahaan waa waxa qofku uga fikiri karo lacag kasta, sida Euro ama Bitcoin. Isticmaalkeedu waa mid aad u jajaban, maahan wax kadis ah in qiimaheeda uu sii kordhayo.
Xigasho: Binance Blog
Qadaadiic Binance waa mid ka mid ah kuwa badan subkan, iyo markii la abuuray waxay ku salaysnayd heerka ERC-20, iyadoo la adeegsanayo Shabakada Ethereum iyo xannibaadeeda. Waa in la xusuusnaado, maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay in qadaadiicdu ay sidoo kale raacayso xeerarka ay dejisay bulshada si loo xakameeyo xannibaadda Ethereum. Si ka sii muhiimsan, si kastaba ha noqotee, waxay u oggolaaneysaa Binance Coin inuu ka faa'iideysto xasilloonida iyo badbaadada in xannibaadda iyo shabakadda Ethereum ay abuureen waqti ka dib. Uma baahnid inaad ka walwasho qadaadiicdaada in lagaa xaday waxoogaa weerar ah sababtoo ah way ilaashan yihiin, oo laga dhisay Ethereum.
Wax walba way isbeddeleen Abriil 2019, goorma Binance wuxuu u wareejiyay BNB mid u gaar ah weyn. Waqtigaas, waxay sidoo kale gubeen 5 milyan oo ERC-20 BNB calaamado ah waxayna u qoondeeyeen qadar u dhigma oo ah BEP-2 calaamadaha asalka ah ee BNB boorsooyinkooda.
Waqtigaas ka dib Binance wuxuu ku dhiirrigeliyey isticmaaleyaasheeda inay u beddelaan astaamahooda BNB ERC-20 calaamadaha BEP-2, laakiin hadda Binance wuxuu wali taageeraa calaamadaha ERC-20 oo adeegsadayaashu wali way awoodaan inay u beddelaan BEP-tokens. 2, inkasta oo aysan ahayn maya muddo dheer oo suurtagal ah in laga baxo calaamadaha ERC-20.
Binance's Blockchain sidoo kale waa mid aad u jilicsan: waxay abuurtaa astaamo cusub oo lagu naawiliyo hantida jirta, dirista, helitaanka, reexaanta ama gubashada, barafka ama furitaanka astaamaha.
Waxa kale oo aad daawan kartaa suuqa 'DEX' si aad u xaqiijiso qiimaha iyo dhaqdhaqaaqa suuqa ee hantida qaarkood, sahamiso taariikhda macaamilka iyo baloogyada xannibaadda, adoo adeegsanaya Binance Chain Explorer.
Ma aha in la xuso inaad sidoo kale ka qarin karto xogta kale ee Binance Chain adoo adeegsanaya buuxa node API, soosaar qalab iyo codsiyo si looga caawiyo isticmaaleyaashu inay adeegsadaan Binance Chain iyo Binance DEX iyo, dabcan, u diraan oo ay helaan astaamaha BNB.
Silsiladda 'Binance Chain' waxay adeegsaneysaa qaab la beddelay oo ah heshiiskii loo yaqaan 'Tendermint BFT'. Tendermint ayaa loo abuuray in loogu isticmaalo Shabakada Cosmos oo adeegsanaya qaab dhismeed qaabaysan si loo gaadho himilooyin dhowr ah, oo ay ku jiraan bixinta shabakadaha iyo heerarka la isku raacsan yahay ee xannibaadda, sida haddii ay tahay barxad lagu codsan karo barnaamijyo baahsan oo kala duwan.
Ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee naqshadeynta Silsiladda Binance waa:
Majiro lacag: ganacsatadu waxay gacanta ku hayaan furayaashooda gaarka ah iyo dhaqaalahooda.
Waxqabadka sare: daahitaan hoose, soosaar sare (bandwidth dhab ah oo la cabiray) oo loogu talagalay saldhig weyn oo adeegsade iyo ganacsi xisaabeed sare. Ujeedo jeer 1 ilbidhiqsi halkii baloog, oo leh 1 xaqiijin ah ugu dambeyn (dammaanadda in macaamillada aan la beddeli doonin).
Qiimo jaban: labadaba guddiyada iyo qiimaha xisaabaadka.
Khibrad isticmaale fudud: saaxiibtinimo sida Binance.com.
Ganacsiga cadaalad ah: yareeyo socodsiinta sida ugu macquulsan.
Dareema: awood u leh inay horumariso horumar isdaba-joog ah oo teknoolojiyadeed, qaabdhismeedyo iyo fikrado ah.
Khalad ma ahan in la weydiiyo waxa loo yaqaan 'Binance Coin', maxaa yeelay ma ahan lacag. Sida calaamad loo adeegsaday barta Binance, waxay leedahay ujeedo aad u qiimo badan. Xusuusnow in Binance ay kugu dallacdo khidmadda ganacsiga ee macaamil kasta oo aad sameyso.
Sidee ku saabsan joojinta bixinta khidmadaha macaamil ganacsi? Qiimaha Binance waxaad ku awoodi kartaa, maadaama tani ay tahay waxa loo isticmaalo, si loo bixiyo guddiyada ku saabsan isweydaarsiga Binance.
Intii aad bixin lahayd $ 1 khidmad ah $ 1.000 kasta oo aad ka ganacsatid (taas oo run ahaantii isku dari karta oo noqon karta wadar aan laga fiirsan karin ganacsatada firfircoon), waxaad si fudud u isticmaali kartaa qadaadiicda Binance si aad ugu daboosho khidmadaha. Tani waxay ka dhigeysaa Binance Coins mid aad waxtar iyo qiimo ugu leh ganacsatada sarrifka Binance.
Waa tan sida saxda ah ee ay u shaqeyso: Binance wuxuu yareeyn doonaa khidmadaha ganacsiga kuwa doonaya inay isticmaalaan lacagta Binance inta ay ganacsanayaan, shanta sano ee ugu horreysa. Oo waxaa jira nidaam komishan iskeelka cabbiraadda, sidaa darteed sanadka ugu horeeya waxaad kaheli kartaa qiimo dhimis 50% ah gudiyadaada adoo adeegsanaya Binance Coin.
Qiimo-dhimis ku saabsan khidmadaha ganacsiga ee haysta kuwa haysta BNB. Xigasho: Binance
Qiimo dhimistu waa kala badh sanad kasta, markaa sanadka labaad dhimistu waa 25%, sanadka saddexaadna waa 12,5%, sannadka afraadna waa 6,75% halka shanaad iyo sanadkii la soo dhaafayna laga saaray sicir-dhimista.
Sicir-dhimistaan ​​si otomaatig ah ayaa loo xisaabiyaa oo loo jaray haddii aad ku haysato lacagta qadaadiicda ah ee 'Binance' ee boorsadaada sarifka. Haddii aadan rabin inaad u isticmaasho lacagtaada Binance si aad ugu daboosho khidmadaha, waxaad sidoo kale si fudud u gab kartaa muuqaalkan.
Laakiin…. laakiin haddii sicir-dhimista ay sii socoto inay sii yaraaneyso, calaamaddu wax qiimo ah ma lahaan doonto dhamaadka?
Maaddaama ay dad aad u tiro badan soo jiitaan isweydaarsiga Binance waxay u keeni doonaan qiimo aad iyo aad u badan lacagta, laakiin aasaasayaasha Binance waxay sidoo kale heleen xal kale oo looga hortago in qiimaha astaantu uu hoos u dhaco.
Rubuc walba waxay kaqaataan 20% faa iidadooda guddiyada waxayna u isticmaalaan inay ku iibsadaan qadaadiic ayna "gubaan" ama u baabi'iyaan.
Gubashadan waxay horey u dhacday 14 jeer, iyadoo gubashadii ugu dambeysay ay dhacday Janaayo 19, 2021, waana tii ugu badneyd ee abid la diiwaan geliyo, halkaasoo 3,6 milyan oo BNB ah lagu burburiyey. Midka labaad ee ugu weyni wuxuu ahaa Abriil 15, 2018, markii Binance uu gubay 2.220.314 BNB.
Adoo ka qaadaya qadaadiicda wareega, Binance wuxuu ka dhigayaa qadaadiic haraaga ah kuwo aad u qiimo badan. Tani waxay sii socon doontaa inay dhacdo illaa kala badh ka mid ah bixinta lacagta, ama 100 milyan oo BNB, la baabi'iyo.
Markaad falanqeyso jaantuska BNB waxaad arki doontaa in qiimaha qadaadiicdu ay kordho markasta oo gubasho dhacdo (marka laga reebo markii ugu horeysay, maxaa yeelay lama oga inay imaaneyso).
Binance wuxuu u dabaaldegayaa gubashadii siddeedaad. Xigasho: Binance Blog
Launchpad waa soo jeedin kale oo xiiso leh oo uu bilaabay Binance waqti aan fogayn. Tani waa goob soo saar calaamadeed oo ah beddelka Binance ee Etheruem ICO. Waxay u oggolaan doontaa mashaariicda cusub inay si toos ah u soo saaraan astaamahooda Launchpad.
Tani sidoo kale waxay aad muhiim ugu tahay Binance Coin (BNB) maadaama loo adeegsan doono inay tahay astaamo u gaar ah arrinta. Sida ay ICOs ugu kiciyeen ETH iibka ay taageerto Ethereum, BNB waxaa loogu beddeli doonaa calaamadda ay soo saartay mashruuca lacag ururinta.
Farsamadan ayaa horeyba loogu isticmaalay si wax ku ool ah BitTorrent Token (BTT). Baahida ayaa ahayd mid xoogan oo iibkii oo dhan lagu dhammeeyey wax ka yar 20 daqiiqo. Waxaa sidoo kale jiray dhawaanahan kor u kaca qiimaha BNB markii la ogaaday in mashruuc kale uu adeegsan doono Launchpad si uu u soo saaro astaamihiisa: mashruuca Fetch.ai. Tani waa xaqiijin dheeri ah in dhaqdhaqaaqa agagaarka Launchpad uu sare u qaadi karo baahida loo qabo qadaadiicda BNB: maadaama ay sii kordhayaan adeegsadayaashu inay gacanta ku dhigaan BNB si ay u maalgashadaan Fetch.ai, waxay sii wadeen inay iibsadaan BNB si ay sidaas u sameeyaan.
In kasta oo Binance uu yahay is-weydaarsi ballaadhan oo ballaadhan, haddana way aqbaleen oo way fuliyeen codsigii ganacsatada ee ku saabsanaa is-dhaafsiga baahinta. Marka la eego arrintan waxay bilaabeen kuwo iyaga u gaar ah Xisaabinta DEX.
Haddii aadan weli ogeyn, isweydaarsiga baahinta (DEX) waa isweydaarsiga cryptocurrency kaas oo u oggolaanaya ganacsiga asxaabta-u-faca u dhexeeya kaqeybgalayaasha. Muhiim ma aha in loo diro cryptocurrencies boorsada lacagta lagu beddelayo, oo amar lagu bixiyo.
Faa'iidooyinka isticmaalka Binance DEX. Xigasho: Binance.org
Xisaabinta DEX waa jawaabta Binance ee su'aashan.
Waxaa lagu dhisay dusha sare ee 'Binance Chain' iyo hantida asalka ah ee awooda sarrifka ay si cad u tahay calaamadeeda BNB. Qaar ka mid ah astaamaha kale ee Binance DEX waxaa ka mid ah awooda lagu:
soo saar astaamo cusub
si toos ah ugu dir macaamiisha kale astaamaha 'DEX'
gub calaamadaha sida loogu baahan yahay
qabooji astaamaha qaar kadibna dhalaal kadib
soo jeediyaan lamaane ganacsi oo cusub
Iibso BNB DEX BINANCE
Laga bilaabo maanta, Maarso 2021, BNB waa saddexaad cryptocurrency ugu weyn ee loo yaqaan 'cap cap' oo leh suuq suuq ah $ 41,53 bilyan. Waqtiga ugu hooseeya ee $ 0,096109 ee qadaadiicda ayaa dhacay wax yar ka dib markii la bilaabay Agoosto 1, 2017. Waqtiga ugu sarreeya wuxuu ahaa mid aad u dhow, BNB wuxuu garaacay $ 333 Febraayo 20. sanadka. Uma xuma kuwa rumeeyey lacagta.
Waxqabadka qiimaha BNB. Tiriyo: coinmarketcap
Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado in dhaqdhaqaaqa qiimaha BNB uu aad uga duwan yahay kuwa kale oo badan subkan leh xarafyada suuqa la midka ah. Marka ugu horeysa waa in loo tixgeliyaa in gubashada joogtada ah ee lacagta (gubida, burburka) ay hoos u dhigeyso saadka (dareenka macnaha helitaanka) ee BNB suuqa. Markaana kor u kaca dalabka ..
Labadan arrimood ayaa sabab u ah in BNB uu ka isbeddel yaraa sannadihii la soo dhaafay marka loo eego lacagaha kale. Intaa waxaa sii dheer, had iyo jeer waxay dan ugu jirtey Binance inay lahaato lacag deggan oo deggan oo loo isticmaalo sidii ganacsi ganacsi. Taasi waxay tiri, waxay dhawaan sii daayeen noocyadooda gaarka ah ee fiat stablecoins - aan ka hadalno Binance USD iyo Binance GBP stablecoins.
Waxaan ku aragnay onmarketmarketka: mugga iyo xisaabtanka Binance Coin (BNB) aad ayey u sarreeyaan. Sidoo kale, inta badan mugdani waxay ku dhacdaa Binance iyada oo loo marayo Tether (USDT) iyo lammaanaha Bitcoin. Si kastaba ha noqotee, BNB sidoo kale waxay ku qoran tahay isweydaarsiyada kale ee bixiya xisaabaad dheeri ah iyo qiimo wanaagsan, sida P2PB2B, Coinsbit, MXC, iwm.
BNBs waxaa lagu keydiyaa jeebka (jeebka) sida kuwa kale ee loo yaqaan 'cryptocurrency'. Markii hore waxaa lagu keydin karaa wax kasta oo boorsada ERC-20 ah oo iswaafajiya, laakiin laga bilaabo Abriil 2019 oo loo beddelo astaamaha iyo astaamaha BEP-2, waxaa loo baahan yahay jeebka loo yaqaan 'BEP-2 boorsada isku habboon'.
Nasiib wanaag, waxaa jira shaqooyin badan oo taageera BNB. Haddii aad rabto amniga ugu sarreeya waxaad dooran kartaa jeebka qalabka sida Ledger ama Trezor. Haddii aad doorbideysid jeebka wareega waxaad isticmaali kartaa Coinomi, BRD, Trust Wallet ama Atomic Wallet. Jaxx Liberty sidoo kale waxay taageertaa BNB, sidoo kale sacab sacab kale oo boorsooyin ah.
Iibso QIIMAHA BINANCE (BNB)
Maaddaama Binance Chain uu yahay mashruuc il furan waxaan awood u leenahay inaan si toos ah u eegno keydadkooda koodhadhka si aan fikrad wanaagsan uga helno hab-maamuuska iyo horumarka ka dhacaya.
Koodh ayaa galay (diiwaangelinta diiwaan gelinta) waa barometer weyn oo lagu go'aaminayo sida saxda ah inta shaqo heer maamuleed la qabanayo. Kuwani waa waxqabadyada firfircoon ee Binance Chain ee GitHub sanadihii ugu dambeeyay ee 3.
Xeerka Ballanqaadka binance-silsilad / docs-site. Xigasho GitHub
Waxay umuuqataa nidaam deegaan oo qurux badan.
Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee ah in la ogaado waa sida firfircoon ee soo-jeedinta Binance Evolution Proposal (BEP) ee hoos ku xusan ay tahay.
I BEP iyagu waa Binance Chain u dhiganta Soo-jeedinta Horumarinta Bitcoin waana qaar ka mid ah waxyaabaha ay bulshadu jeclaan lahayd in la hirgeliyo.
Waxaa jira tiro aad u tiro badan oo ah 'BEPs' oo udub dhexaad u ah rajo laga qabo. Dabcan, nidaamka deegaanka ee ballaaran ee BNB sidoo kale wuxuu leeyahay khariidad quruxsan oo xoog leh oo dadaallada ah. Aynu eegno qaar ka mid ah.
Binance Coin wuxuu ka yaraa astaamo si adag loo adeegsaday si loogu bixiyo khidmadaha ganacsiga markii ay jirtay, in kastoo qaar ka mid ahi ku doodayaan in mala-awaalka suuqyada furan ay ka dhigayaan lacag dijitaal ah mid u gaar ah.
Tani had iyo jeer ma ahaan doonto kiiska, si kastaba ha noqotee, maadaama kooxda Binance ay qorsheyneyso inay si weyn u ballaariso baaxadda isticmaalka lacagta qadaadiicda ah ee BNB. Waxaan sidoo kale jecel nahay tan inbadan markaan tixgelinayno in maadaama qiimaha BNB uu sii kordhayo, iyo sababta oo ah saldhiga isticmaalaha sii kordhaya ee Binance wuxuu doonayaa inuu isticmaalo lacagta si uu ugu badbaadiyo khidmadaha ganacsiga.
Lacagta Binance ayaa mar horeba loo isticmaali karaa in lagu maalgeliyo ICO-yada lagu martigeliyay barnaamijka Binance Launchpad, kaas oo siiya dadka haysta BNB hab ay dib ugu soo ceshan karaan lacagtooda. ICO-yadaas waxaa ka mid ahaa Rootiga, BitTorrent, Elrond, WINk, Kava, iyo tiro ka mid ah mashaariicda kale ee xannibaadda. Binance Launchpad maalgelintiisa BNB ayaa si cadaalad ah u guuleysatay illaa iyo hadda, taas oo siinaysa BNB calaamadda faa iidada dheeriga ah.
Mashaariicda isticmaalaya Binance Coin
Marka loo eego caqligan, maaddaama suuqyo badan oo baahsan ay ku heshiiyeen inay ka ganacsadaan lacagta cusub, waxaad u badan tahay inaad arki doonto kororka baahida loo qabo BNB si loo xoojiyo.
Waqtigan xaadirka ah adeegsiga kale ee loo adeegsado BNB si loogu bixiyo kharashyada safarka ganacsatada laga soo xulay Australia, bixiya biilka kaarka amaahda ee Crypto.com, ka soo iibso hadiyado dalwad ah barnaamijka 'Mithril platform', wax ka bixi dukaamada ay isticmaalaan nidaamka XPOS PundiX iyo tiro kale isticmaalaa. Run, badankood waxay kuxiran yihiin astaamo shaqsiyeed, laakiin kolba sida adeegsiga u kordho, nidaamka deegaanka BNB wuu sii kori doonaa sidoo kale.
Maaddaama Binance uu sii kordhayo oo uu ku kordhinayo astaamo cusub, waxaa hubaal ah in tirada waxyaabaha lagu sameyn karo shilimaadka Binance ay sii kordhi doonaan.
Waa in aan la iloobin in ay mar horeba suurtagal tahay in BNB looga ganacsado sidii khayaaliye, isagoo isku dayaya inuu ku soo galo qiimo jaban ka dibna ku iibiyo calaamadda qiimo sare, sida ay dad badani durba sameynayaan! Qofkasta oo waxyar kahor bilaabay wuxuu hubaa inuu arkay lacag badan. Aad uga taxaddar inaad soo gasho hadda oo gabalku aad u dheer yahay.
Ma dafiri karo in masiirka lacagta Binance ay si dhow ula xiriirto waxqabadka Binance qaabkeeda Sarrifka. In kasta oo Binance ay si tartiib tartiib ah uga sii deyneyso sicir-dhimista khidmadda ganacsiga iyada oo loo marayo isticmaalka Qadaadiic 'Binance Coin', waxay sidoo kale raadineysaa habab kale oo lacagta looga dhigo mid xitaa ka qiimo badan.
Sida gubida, gubida, burburinta bixinta lacagta qadaadiicda iyo abuurista isweydaarsi baahsan oo u adeegsada lacagta Binance lacagta dalkeeda. Isticmaalka mustaqbalka ee BNBs ayaa ka dhigi doona mid sii kordhaya oo faa'iido leh isla markaana kiciya baahida lacagta.
Dabcan, suurtagalnimada kor u kaca qiimaha lacagta Binance waxay kuxirantahay guusha Binance oo ah Sarrifka. Binance ma gaarayo guul, waa sii xoojineysaa.
Maqaalka horeSidee Margin Trading (LEVA) loogu sameeyaa Binance?
Maqaalka xigtaSicir-dhimista khidmadaha Binance